Noocyo cusub oo cufan | February 2020
Ugu Weyn Ee Noocyo cusub oo cufan
Noocyo tufaax ah oo cufan: sharaxaad iyo daryeel
Faa'iidooyinka beeritaanka geedaha tufaaxa ee guluubka ku yaala ayaa aad u muuqda. Waxay qaadanayaan meel ka yar waxayna awoodaan inay ku siiyaan dalagyo badan oo waaweyn. Si kastaba ha noqotee, geedaha tufaaxa ee dwarf waxay leeyihiin dabeecadahooda iyo shuruudaha daryeelka, kuwaas oo beeralayadu waa inay ogaadaan. Faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan dhirta dhirta geela, waxaanu idinla wadaagnaa maqaalkan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo cusub oo cufan 2020